Bogga ugu weyn Waa Maxay Ikhtiyaarada Ganacsi ee Ugu Fiican Kanada 2022?
Isha sawirka: forexcanada
Qofku wuxuu leeyahay xulashooyin badan oo uu kala doorto marka ay khusayso ikhtiyaarada ganacsiga iyo dammaanadaha Kanada. Tani waa sababta oo ah suuqa ayaa diyaariya alaabo maaliyadeed oo badan oo qofka ka caawin kara inuu habeeyo istiraatiijiyaddiisa maalgashi.
Ikhtiyaaraadka sida maalgashi kasta oo kaleba waa halis oo waa mala awaal. Markaa, waxaa lagula talinayaa in qofku maal gashado waxa uu u dulqaadan karo haddii uu lumo iyo aalado leh khataro yar iyo faa'ido badan.
Waa maxay Fursadaha Ganacsi?
Ikhtiyaaraadka ganacsigu waa heshiisyo qandaraas oo siiya qofka wax xambaarsan, xuquuqda aan lahayn waajibaadka (si ka duwan qandaraaska caadiga ah kaas oo xaq walba la imanayo waajibaadkiisa) si loogu iibsado ama loogu iibiyo qaddar ka mid ah hantida aasaasiga ah qiime hore loo go'aamiyey ama ka hor dhicitaanka heshiiska qandaraaska.
Tani waxay wanaajin kartaa faylalka faylalka ee qofka waxaana taas lagu sameeyaa dakhli dheeri ah, ilaalin, iyo xitaa awood. Ikhtiyaarada waxaa loo iibsan karaa sida fasalada hantida kale, loogu iibsado xisaabaadka maalgashiga dullaalnimada.
Tusaalaha caanka ah ee tani waa isticmaalka fursadaha sida xayndaab wax ku ool ah oo ka dhan ah hoos u dhaca suuqa saamiyada si loo xaddido khasaaraha hoos u dhaca.
Waxa kale oo loo isticmaali karaa soo-saarka dakhliga soo noqnoqda iyo ujeedooyin male-awaal ah sida wagereynta jihada kaydka. Sida ganacsi kasta oo kale oo ganacsi, had iyo jeer ma aha hawl xiiso leh.
Ganacsiga ikhtiyaariga ahi wuxuu kaloo la yimaadaa khataro u gaar ah oo ay tahay in maalgashade kastaa la yeesho ka hor inta uusan ganacsi samayn, isagoo sabab u ah dillaaliintu had iyo jeer ku daraan been -abuurka khudbadahooda.
Akhri Sidoo kale: Ganacsiga Forex ee Nigeria | Tilmaame Talaabo-Talaabo Buuxa ah ee Bilowga ah
Sidee buu u shaqeeyaa Xulashada Kanadiyaanka?
Waxaa jira laba qaab oo aasaasi ah oo ikhtiyaari ah, ikhtiyaarka Ameerika, iyo ikhtiyaarka Yurub.
Dillaaliinta qaarkood waxay yiraahdeen ikhtiyaarrada Kanada waa qaabka Ameerika. Tani waa sababta oo ah sida Aasiya ay tahay qaarad laga heli karo Shiinaha, Ameerika halkaan waxaa loo adeegsadaa qaabkeeda sifaha sababta oo ah kuma koobna USA oo keliya laakiin waxaa ku jira Kanada.
Hababkaan qasab ma aha gobolka laakiin qaababkaan waxay tixraacayaan waqtiga jimicsiga ee ikhtiyaarrada sida ikhtiyaarrada Yurub waxaa lagu dhaqmi karaa oo keliya taariikhda dhicitaanka halka ikhtiyaarrada Mareykanka la adeegsan karo waqti kasta illaa taariikhda dhicitaanka oo aysan shaqo ku lahayn gobolka qalab hoose.
Sida kor ku xusan, ikhtiyaarrada ganacsiga ee liiska kaydka Kanada ayaa noqon doona Ameerika. Si kastaba ha noqotee, ikhtiyaarrada tusmooyinka (sida S & P/TSX 60) waa qaab Yurub ah.
Ikhtiyaarada saamiyada Kanada waxay noqon kartaa isha soo saarista guddiyo badan oo dilaalnimo, taas oo ah sababta qaar da 'yar oo dillaaliin ah oo dagaal badan ay kula taliyaan macaamiishooda. Taasi waa in kasta oo ay sii kordhayso shaacinta khidmadda trailer-ka iyo hirgelinta buuxda ee Kanada ee shuruudaha shaacinta kale ee warshadaha.
Ikhtiyaarku waa heshiis u dhexeeya iibsadaha iyo iibiyaha kaas oo ku salaysan nabadgelyo hoosaad, badiyaa kayd. Iibsaduhu wuxuu iibiyuhu siinayaa lacag, ama qaddar, xuquuqda qaarkood ee saamiyada. Beddelka lacagta caymiska, iibiyuhu wuxuu qaataa waajibaadka qaarkood.
Ikhtiyaariyada ayaa ka ganacsada is -weydaarsiyada saamiyada, iyo heshiis kasta oo ikhtiyaar ah waxaa loogu talagalay 100 saamiyo shirkad gaar ah. Haddaba hal qandaraas oo lagu soo xigtay $ 5 ayaa kugu kici doona $ 500 (guddiyada ka hor).
Qandaraas kastaa wuxuu leeyahay taariikh dhicitaan, kaas oo siinaya cimri dherer kooban (badiyaa wax ka yar sagaal bilood). Qiimaha shaqo joojinta (ama qiimaha jimicsiga), waa qiimaha ay iibsaduhu ku adeegsan karaan xuquuqdooda sida waafaqsan heshiiska.
Waxaa jira laba nooc oo ikhtiyaarro ah:
Wicitaanada sii qofka haysta ama iibsadaha xaq uu ugu leeyahay inuu ku iibsado amniga hoose qiimaha shaqo joojinta cayiman ilaa taariikhda dhicitaanka. Iibiyaha wicitaanku wuxuu leeyahay waajibka ah inuu iibiyo ama bixiyo amniga hoose ee sicirka shaqo joojinta ilaa taariikhda dhicitaanka, haddii qofka ikhtiyaariga ah uu adeegsado ikhtiyaarka.
Dheereeya sii qofka haysta ama iibsadaha xaq u leh inuu ku iibiyo amniga hoose qiimaha shaqo joojinta ilaa taariikhda dhicitaanka. Taa beddelkeeda, iibiyaha ama qoraaga dhigaalka ayaa leh waajibka ah inuu iibsado ama geeyo amniga hoose ilaa uu ka dhacayo, haddii qofka ikhtiyaariga ah ikhtiyaarka u leeyahay.
Sida loo kala doorto Ganacsiga Kanada
Kanada, securyyadu waxay u gudbi karaan si ay xaq ugu yeeshaan haddii ay ku qoran tahay sarrifka saamiyada Kanada iyo suuqgeynta suuqyadu waxay ku jiraan boqolkiiba 25 ee ugu sarreeya ee dammaanadda ee ku taxan sarrifka Kanada.
Tani waa sababta oo ah ikhtiyaarrada ganacsiga ayaa aad khatar u ah oo mala -awaal ah, qofku waa inuusan maalgelin kaliya maadaama uu awoodo. Qaar ka mid ah tallaabooyinka lagama maarmaanka ah waxaa ka mid ah
Go'aaminta xadiga lacagta ah ee lagu ganacsanayo. Tani waxay noqon kartaa inta lacag ah ee uu dallaalku uga baahan yahay furista akoon taasoo inta badan ku dhacda inta u dhaxaysa $2000. Marka ay timaaddo qaadashada go'aankan waa in la tixgeliyo, khatarta weyn ee ku jirta. Taas macneheedu waxa weeye in wax kasta oo la isticmaalo waa in ay noqdaan qadar la lumin karo.
Dooro dillaal ka ganacsada fursadaha. Marka la dooranayo dillaal, maalgeliyuhu wuxuu doortaa mid leh xaalado wanaagsan oo ay ka mid yihiin: mid leh xulashooyin badan, khidmadaha komishanka oo aan qaali ahayn iyo sumcad wanaagsan/adag. Xaaladda shakiga, mid ayaa ka hubin kara ilaaliyaha amniga si loo xaqiijiyo xaaladahaas. Nidaamiyayaashan amniga waxaa laga heli karaa gobol kasta iyo territoriga Kanada.
Dooro istaraatijiyad ganacsi oo ikhtiyaari ah. marka laga ganacsado nooc kasta oo madal maalgashi. Istaraatiijiyad ayaa loo baahan yahay. Qofku waa inuusan wax iibsan maxaa yeelay wuxuu dareensan yahay inuu taas bedelkeeda, xeelado cad waa inay jiraan si loo qorsheeyo waxa la iibsanayo iyo iibinta iyo sidoo kale la qorsheeyo goorta la iibsanayo iyo la iibinayo. Barashada daqiiqadaha qiimaha ee Bloomberg ama kireyste waxaa lagula talinayaa.
Ku tababar koontada demo si aad u wanaajiso saamaynta khasaaraha oo ay sababi karto aqoonta hiwaayadda ee ganacsiga tani waa sababta oo ah inkasta oo koontada demo ay u muuqato mid dhab ah, lacagtu ma aha mid dhab ah.
Ku biloow koontada nolosha oo marka aad sidaas samayso waxaa lagugula talinayaa inaad bilowdo yar. Si aad u dhadhamiso awooddaada Samee waxoogaa yar oo wax iibsi ah.
Waa maxay arrimaha la rabo in la tixgeliyo marka la saadaalinayo Ikhtiyaarada Ganacsiga ee Kanada?
Qodobadan la rabo in la tixgeliyo xilliga saadaasha waxaa ka mid ah; qiimaha kor u kaca iyo hoos u dhaca.
Ikhtiyaarada ganacsigu waa khatar taasina waa sababta ugu wayn ee lagugula talinayo inaad la ganacsato saamilayda khibradda sare leh si aad mala-awaalkaaga uga dhigto mid sahlan.
Caadi ahaan, ganacsade ayaa qiyaasaya inay jiri doonto kor u kac ama hoos u dhac qiimaha sicirka taasina waxay go'aamineysaa ikhtiyaarka ganacsadaha ugu dambeyn doorto. Haddii uu tago ikhtiyaarka wicitaanka, waxay ka dhigan tahay inuu rajaynayo kor u kaca qiimaha saamiyada sidaas darteedna uu doorto inuu ku iibsado saamiyada qiimo sare.
Haddii uu doorto kan dambe oo ah ikhtiyaarka la dhigay, wuxuu malayn lahaa hoos u dhac ku yimid qiimaha saamiyada sidaas darteedna wuxuu doortaa inuu iibiyo waqti dambe iyo qiimo go'an.
Akhri Sidoo kale: Dillaaliyeyaasha ugu Wanaagsan ee Ganacsiga ee Ganacsiga 2022
Sidee ikhtiyaarrada saamiyada ee Kanada lacag kuugu kacaysaa?
Siyaabaha soo socda ayaa ah sida ikhtiyaarka ganacsi ee Kanada uu kuugu samayn karo inaad lacag ku qarashgareyso.
Ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah si uu lacag ugu sameeyo ikhtiyaarada saamiyada Canadian, waa inuu si sax ah u saadaaliyaa jihada qiimaha saamiyada. Haddii ganacsaduhu doorto ikhtiyaarka wicitaanka, waxay la macno tahay in uu sharadka qiimuhu kor u kici doono.
Laakiin, iyada oo ikhtiyaar loo dhigay, sharadkiisu hubaal waa qiimo dhac.
Dhacdooyinka doorashadu waxay ka dhigaysaa mid aan qiimo lahayn, tani waxay ka dhigan tahay in ikhtiyaarka haystaha uusan kaliya saadaalin jihada isbeddelka qiimaha ee danta hoose iyo xajmiga dhaqdhaqaaqa, laakiin sidoo kale marka uu isbeddelka qiimaha dhaco.
Ganacsadaha ikhtiyaariga ah ayaa lumin doona dhammaan, ama qayb aad u weyn oo ka mid ah maalgelintiisa ikhtiyaarka haddii qiimaha dulsaarku uusan ku filnayn jihada la saadaaliyay kahor dhicitaanka ikhtiyaarka.
Qiimaha Sare ee Ganacsiga
In kasta oo ikhtiyaarrada ganacsiga, waxaad bixin doontaa guddiyada mar kasta oo aad iibsato ama iibiso xulashooyinka saamiyada. Qayb weyn oo ka mid ah faa'iidooyinka laga helay ikhtiyaarrada saamiyada waxaa isticmaala guddiyada.
Tani waa gaar ahaan halka ganacsiga lagu sameeyo tiro yar.
Meesha ganacsadaha ikhtiyaariga ahi uu ku habboon yahay saadaasha jihada sicirka saamiyada, waa inuu sidoo kale awoodaa inuu saadaaliyo xaddiga ugu yar ee saamigu dhaqaaqi doono.
Haddii saamigu kor u kaco ama hoos ugu dhaco qaddar yar ka hor intaysan dhicin, wuxuu weli lumin doonaa lacag.
Qol xaddidan oo loogu talagalay Qalad aan laga maarmi karin
Ikhtiyaarku wuu ka duwan yahay saamiyada caadiga ah sidaas darteedna wuxuu leeyahay cimri xaddidan. Marka laga hadlayo ganacsiga guud iyo rajada laga qabo in qiimahoodu kor u kaco, ganacsade ikhtiyaariga ah ayaa hayn kara saamiyada guud muddo aan la cayimin.
Hantidhawlaha ayaa laga yaabaa inuu doorto inuu sugo oo sugo hoos u dhac ku meelgaar ah isagoo rajaynaya inuu ogaan karo faaiido laakiin markay timaaddo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah, ikhtiyaar kasta wuxuu leeyahay taariikh dhicitaan oo ah, haddii aan la tuurin oo sababtaani tahay ikhtiyaarka waxaa loo arkaa “hanti luminaysa.
”Qayb ka mid ah qiimaha ganacsadaha ikhtiyaariga ah uu ku doorto ikhtiyaar ayaa ugu horraysa“ wakhti ”oo maalin kasta markay dhaafto wuxuu lumiyaa wax badan oo ka mid ah lacagtan“ wakhtiga ”ah. Ganacsade ikhtiyaariga ah waa inuu si sax ah u saadaaliyaa saddex siyaabood oo kala duwan: jihada qiimaha, baaxadda isbeddelka qiimaha, iyo xaddiga waqtiga. Tani waa inay saameyn ku yeelato sida macaash fiican looga helo xulashada saamiyada Kanada.
Ma siiso Xuquuqda Lahaanshaha
Anigoo niyadda ku hayna in mar kasta oo saamiga hoose uu kala go'o, qandaraasyada khuseeya ikhtiyaarrada saamiyadaas sidoo kale way kala baxaan. Waxaa muhiim ah in la ogaado in ganacsatadu ay ka qaybqaataan oo kaliya faa'iidooyinka suurtagalka ah ee dhaqdhaqaaqa qiimaha saamiyada, si ka duwan lahaanshaha saamiyada taas oo siinaya qofka haysta saamiga shirkadda, xuquuqda saami qaybsiga, iyo xuquuqda codbixinta.
Khatarta Sare ee Khasaaraha Guud
Guud ahaan, saamiyadu waxay noqon karaan kuwo aan qiimo lahayn oo marka ay timaaddo ganacsiga ikhtiyaarka ah, iyo ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa la dhigayaa xaalad uu ku jiro khatar aad u weyn oo ah inuu lumiyo dhammaan lacagta lagu bixiyay ikhtiyaarka muddo gaaban.
Tani waxay sii socotaa si ay u muujiso dabeecadda khatarta ah ee aadka u khatarta ah ee ikhtiyaarka ah sida hantida luminta ee aan qiimo lahayn marka la gaaro waqtigiisu dhacayo. Haddii ikhtiyaarka ikhtiyaarka ah aan la iibin ka hor inta uusan dhicin ka dibna ikhtiyaarka ikhtiyaari ah ayaa maalgalintiisa oo dhan ku yeelan doona ikhtiyaarka.
Ilaha Barashada Ikhtiyaarka Ganacsiga
Ikhtiyaarradu waxay noqon karaan kuwo soo jiidasho leh xitaa maadaama ay la xiriirto khataro. Waa run in ikhtiyaarrada ganacsigu ay awood u leeyihiin inay keenaan soo-celin sare, sidoo kale waxay noqon karaan ganacsi koraya oo kasbanaya kayd cusub maxaa yeelay istiraatiijiyad-wax-ku-ool ah. Waxa kale oo ay yaraynaysaa khasaaraha xaaladaha ay sicirrada saamiyadu bilaabaan inay hoos u dhacaan laakiin tani ma beddelayso xaqiiqda ah in gelitaanka ka ganacsiga ikhtiyaarrada aan la samayn iyada oo aan la diyaarin.
Ganacsade ikhtiyaari ikhtiyaariga ah waa inuu ku bilaabo akhrinta inta uu awoodo ee ku saabsan xulashooyinka buugaag, mareegaha, baloogyada, buugaag badan, degello badan, baloogyo badan. Marxaladda akhrisku waxay marka hore ka caawin doontaa inuu la qabsado xeeladaha.
Ilahaas qaarkood waa shirkado sida Charles Schwab Kaas oo haysta agab ganacsi oo ikhtiyaari ah oo ay heli karaan macaamiishooda, iyo Fidelity oo waliba leh a hagaha istaraatiijiyada xulashooyinka taasi waxay caawisay walina waxay caawineysaa ganacsade ikhtiyaariga ah inuu barto xeelado kala duwan oo uu mid ku guuleysan karo marka la kala dooranaayo ganacsiga.
Waxa kale oo jira ilo internet oo lacag la’aan ah sida Xulashada Alpha ama TastyTrade. Xaaladaha uu ganacsadaha ikhtiyaariga ahi ku shaqaynayo isagoo kaashanaya dilaalnimo ku takhasustay ka ganacsiga ikhtiyaariyada, waa in la siiyaa tilmaamaha qalabka waxbarashada.
Goobaha Ikhtiyaarada Ganacsi ee ugu Fiican Kanada.
Ganacsade ikhtiyaariga ah ayaa laga yaabaa inuu la kulmo su'aasha ah meheradaha uu ku samayn karo ikhtiyaarradiisa ikhtiyaariga maxaa yeelay waxaa jira kuwo badan oo ka mid ah waqtiyadan hadda jira kuwani waa qaar ka mid ah aaladaha ugu fiican
Qtrade waa madal lagu shaqayn karo laba qaab oo kala ah mareegaha ganacsiga iyo app -ka mobilada ee ganacsiga. Mid waa inuu ka taxaddaraa inuusan ku khaldamin madal kale oo xambaarsan Questrade iyo madal ganacsi oo horumarsan halkan ma aha ikhtiyaar.
Websaydhku wuxuu caan ku yahay dabeecad dareen leh iyo awood u leh inuu fududeeyo ganacsiga. Dhinaca kale, dib-u-eegisyo badan ayaa siiyay 2.4 ka mid ah 5-xiddig qiimeynta labada foomba maxaa yeelay appku ma dhakhso badna, wuxuu ka dhigaa gelitaanka hawl herculean ah iyo is-dhexgalku waa mid qallafsan.
Si aad uga ganacsato madalkan, ma jiro qaddar ugu yar oo la cayimay oo loo baahan yahay si loo bilaabo maalgashiga, iyo ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa iska qori kara koontada tababarka.
Waxay leedahay afar goobood waxayna ku bixisaa ganacsi dhammaan afarta meelood ee ay ka kooban tahay;
Questrade trading ie: degelkiisa oo sidoo kale lagu magacaabi karo madal desktop ah
Sababtoo ah aaladahaani way yar yihiin oo way fududahay in lagu ganacsado, hiwaayadda iyo kuwa bilowga ah waxaa lagula talinayaa inay ku ganacsadaan iyo abka.
Taas bedelkeeda, barnaamijkani ma laha dib -u -eegista ugu fiican oo wuxuu ku leeyahay qiimeyn xiddig hoose labadaba App Store iyo Google Play. Sida laga soo xigtay adeegsadayaasha, barnaamijku waa mid buggy ah, gaabis ah, ama barafoobay.
Guddiyada ganacsiga ee ikhtiyaariga ah waa $ 9.95 ganacsi kasta oo lagu daray $ 1 heshiiskiiba. Markaa, ganacsatada firfircoon waxay badanaa bixiyaan $ 4.95 halkii ganacsi oo lagu daray $ 0.75 qandaraas kasta oo ah xaalad uu ganacsaduhu doortay qorshe go'an ama $ 6.95 halkii ganacsi oo lagu daray $ 0.75 halkii qandaraas halka uu ka doortay qorshe doorsooma.
#3. Maalgelinta Tooska ah ee TD
Maalgelinta Tooska ah ee TD sida aaladaha qaarkood waxay bixiyaan ikhtiyaarro ganacsi afar meelood oo kala duwan;
WebBroker (mareegaha caadiga ah),
Feker ama dabaalan
Ardayda iyo kuwa bilawga ahba, WebBroker iyo app-ka ayaa la sheegay inay yihiin habka ugu fudud ee lagu bilaabi karo. Goobta Thinkorswim waa mid u badan Maraykanka waxaana lagu taliyaa ganacsiga iyo bangiyada labadaba waxayna leedahay dib u eegis wanaagsan labadaba App Store iyo google play.
Komishanka caadiga ah ee ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah waa $ 9.99 halkii ganacsi oo lagu daray $ 1.25 heshiiskiiba. Dadka si firfircoon uga ganacsada waxay bixiyaan $ 7 halkii ganacsi oo lagu daray $ 1.25 heshiiskiiba. Guddiyadu waxay la mid yihiin xirfadaha lagu sameeyo sarrifka Ameerika marka laga reebo xirfadaha lagu sameeyo doolarka Maraykanka.
Ma jirto qaddar go'an oo la sameeyay oo lagu maalgelinayo waxaana jira ilo waxbarasho oo maalgashi iyo sidoo kale webinarada nool iyo kuwa baahida loo qabo oo bilaash ah xitaa kuwa aan macaamiisha ahayn.
#4. Dillaaliyeyaasha is -dhexgalka
Brokers Interactive waxay leedahay saddex goobo ganacsi;
Xariirka Macmiilka (boggeeda internetka)
IBKR Mobile (barnaamijkeeda)
Bilowga waa inay adeegsadaan Xariirka Macmiilka Dallaaliyeyaasha Interactive ama app -ka.
Websaydhku ma aha mid adag in la isticmaalo oo sameynta ganacsi waa sahlan tahay. Waxay sidoo kale leedahay dib -u -eegisyo aad u wanaagsan oo ku yaal App Store iyo Google Play.
Guddiyadu way ka hooseeyaan marka loo eego meelaha kale ee lagu tartamayo. Waxay ka bilaabmaan $1.25 qandaraaskiiba iyagoo ugu yaraan $1.50 ku dalacay dalabka wax ka yar 10,000 ganacsi bishii.
Komishanku waa $ 1.15 halkii qandaraas 10,001 ilaa 50,000 oo meheradood bishii, $ 1.05 halkii qandaraas 50,001 ilaa 100,000 meheradood bishii, iyo $ 1 halkii qandaraas marka ganacsade ikhtiyaar ah uu sameeyo in ka badan 100,000 ganacsi bishii.
Laakiin, iyadoo uu jiro ugu yaraan lacag dhan $ 1.50. Si looga ganacsado is -weydaarsiga Ameerika, guddiyadu waa USD $ 0.25 illaa $ 0.65 qandaraaskiiba, iyadoo ku xiran qiimaha ikhtiyaarka ee ka yar 10,000 ganacsi bishii.
Lacagta ugu yar waa USD $ 1. Mashruucan, kolba inta aad ku heli karto qandaraasyo ikhtiyaar ikhtiyaar ganacsi ayaa hoos u dhigaya guddiyada ay tahay inuu bixiyo waxayna noqon karaan kuwa ugu hooseeya $ 0.15 marka uu ka ganacsado in ka badan 100,000 qandaraas bishii.
#5. Awood ku salaysan Webka E*GANACSI
Goobahani waxay bixiyaan dhammaan agabyada lagama maarmaanka ah iyo ikhtiyaarka ganacsadaha u baahan doono. faahfaahinta sida;
Kooxaha si otomaatig ah u faafa
Baadhitaan aan dadaal lahayn iyada oo loo marayo StrategySEEK
Xogta halista ah ee si sahlan loo fahmi karo iyada oo loo marayo ganacsiga
Laga soo bilaabo dhowr meelood oo la sheegay, mid ayaa kugula talin kara Power E*TRADE madal gaar ahaan kuwa bilowga ah taasina waa sababta oo ah xoogaa way fududahay in lagu isticmaalo waxbarashadeeda iyo naqshadeynta dareenka leh.
Tan waxaa lagu tilmaami karaa iyada oo la adeegsanayo aaladda Falanqaynta Sawir-gacmeedka oo aan ku ekaanayn oo keliya khatarta-iyo abaal-marinta lagu tarjumay wejiyada dhoolla-caddaynta ee ikhtiyaarrada ikhtiyaarrada kasta laakiin sidoo kale muujinaya dhacdooyinka suuqa ee muhiimka ah in la fiiriyo iyo dhacdooyinkan ayaa lagu taxay shax P&L.
Marka ay timaado hadhow qaybta xirfadlayaasha, Interactive Brokers ayaa hogaanka u qabta sida madal xulashooyinka ugu badan ee lagu taliyay. Tani waa sababta oo ah, iyada oo leh Interactive Brokers, waxaa jira kharash gunno ah oo maqnaansho ah oo leh heerka qandaraaskiiba $.70. Kaydinta dheeraadka ah ayaa lagu sameeyaa ganacsiyo soo noqnoqda.